Kukandwa kwekemikari kwevanobata chibharo vanodzokorora kwakabvumidzwa muPakistan
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Pakistan Breaking News » Kukandwa kwekemikari kwevanobata chibharo vanodzokorora kwakabvumidzwa muPakistan
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • mhosva • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Pakistan Breaking News • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kukandwa kwekemikari kwevanobata chibharo vanodzokorora kwakabvumidzwa muPakistan.
Zvigadziriso zvitsva zvinounza chirango cherufu kana mutongo weupenyu hwese pakubata chibharo kwechikwata pamwe nekukandwa kwemakemikari kune vanodzokorora kuita zvebonde, nemvumo yeane mhosva.
Zvisingasviki 3% yekushungurudzwa kwepabonde kana kubatwa chibharo muPakistan zvinoguma nekutongerwa mhosva.
Kana kemikari castration ichipihwa sechirango, "ichaitwa kuburikidza nebhodhi rakaziviswa," maererano nemutemo mutsva.
Pakistan inobatana neSouth Korea, Poland, Czech Republic nedzimwe nyika dzeUS, uko kwakaunzwa makemikari castration.
Kugadziridzwa kutsva kumutemo uripo, unobvumidza kukurumidza kutongerwa mhosva uye zvirango zvakanyanya kune vanobata chibharo, zvakavhoterwa nevamiriri vePakistani nezuro.
Matsotsi anobatwa nemhosva dzakawanda dzekubatwa chibharo pari zvino anogona kusangana nekukandwa kwemakemikari Pakisitani sezvo paramende yenyika yakatsigira zvakanyanya mutemo mutsva wakagadzirirwa kumisa kukwira kwemhosva dzepabonde.
Kukandwa kwemakemikari kwakatsanangurwa mubhiri iri senzira iyo "munhu anotadziswa kuita bonde chero nguva yehupenyu hwake, sezvingatemwa nedare kuburikidza nekushandisa zvinodhaka."
Zvakarongwa kumisa matare akakosha munyika yose kuti ive nechokwadi chekuti mitongo yenyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi inopihwa “nekukurumidza, kana mukati memwedzi mina.” Kana kemikari castration ichipihwa sechirango, "ichaitwa kuburikidza nebhodhi rakaziviswa," maererano nemutemo mutsva.
VaMushtaq Ahmed, senator webato rechitendero reJamaat-i-Islami, vakamboshora bhiri iri vachiti harisi rechiIslam. Ahmed akapokana kuti hapana kutaurwa nezvekukandwa kwemakemikari mumutemo weSharia uye kuti vanobata chibharo vanofanirwa kusungirirwa pachena.
Nekushandisa zvinodhaka kuderedza libido yevanodzokorora vanoita zvepabonde, Pakisitani inobatana neSouth Korea, Poland, Czech Republic uye vamwe US inoti, uko kukanda makemikari kwakaunzwa.
Chiyero ichi chakaiswa patafura gore rapfuura neMutungamiriri wePakistani Arif Alvi vachipindura kunyunyuta kukuru kweveruzhinji pamusoro penyaya yakaitika munyika yese panyaya dzekubatwa chibharo dzinosanganisira vakadzi nevana.
Kare ikako, Amnesty International yaishora kudzingwa kwemakemikari se “hutsinye, husimbe” kurapa, ichiyambira Islamabad kuti itarise kugadzirisa hurongwa hwayo “husina kunaka” uye kuona kururamisira kune akabatwa.
Zvinoenderana nevemuno NGO Hondo Yekurwisa Chibharo, isingasviki 3% yekubatwa chibharo kana kubatwa chibharo muPakistan inokonzeresa mutongo.